Lionel Messi, Buffon & Ozil Oo Hogaaminaya Shaxda Kooxda Ugu Fiican Todobaadkaan Champions League-ga | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Lionel Messi, Buffon & Ozil Oo Hogaaminaya Shaxda Kooxda Ugu Fiican Todobaadkaan Champions League-ga
Todobaadkii sadexaad ee koobka Horyaalada Yurub ayaa soo dhamaaday wuxuuna ahaa todobaad xiiso gooni ah leh madama ay ka dhaceen ciyaaro adag oo ay ugu weyneed ciyaartii ay Barcelona ku galgalatay Manchester City ciyaartii ka dhacday Camp Nou.
Shabakadda Caalamiga ah ee Goal.com, ayaa soo saartay shaxdii ugu fiicneed ee todobaadkaan waxaana ay usoo xusheen goolka goolhayaha da’da ah ee Juventus Gianluggi Buffon kaas oo guul u sahlay kooxdiisa kadib markii uu rigoore badbaadiyay ciyaartii ay 1-0 kaga adkaadeen Lyon talaadadii.
Sidoo kale xidigaha mataanaha ah ee kooxda CSKA Moscow Ignashevich iyo Berezutski ayaa si wadajir ah daafaca dhexe uga soo muuqday kadib markii ay kooxdooda ka saacideen iney barbaro 1-1 ah la galaan Monaco.
Wadajirka labadaan ciyaartoy ayaana sababay in kooxda ruushka ah ay dhibic hesho, Ignashevich ayaana dhigay mucjiso gooni ah markii uu goolkiisa kasoo badbaadiyay 19-kubadood oo ay Monaco goolka aadiyeen waana rikoor u gaar ah xidigaan.
Dhanka kale xidigaha sadexleyda dhaliyay ee Lionel Messi iyo Mesut Ozil ayaa shaxdaan ugu tun weyn kuwaas oo hal habeen dhaliyay 6-gool, sidoo kale Chamberlain oo kaalin weyn ka qaatay guushii ay Arsenal ka gaartay Ludogerets ayaa isna kasoo muuqday.
Weeraryahanka kooxda Besiktas Aboubakar ayaa kasoo muuqday ciyaartaan kaas oo u sahlay kooxda reer turkey iney si dhib badan guul kaga helaan Napoli oo ku sugan gurigeeda.
Labada wiil ee da’da yar Thiago Alcantara iyo joorkarka reer Jarmal Kimmich ayaa kasoo muuqday shaxda halka Felipe Luiz iyo daafaca midig ee Porto Layun ay ayagana boos ku yeesheen shaxdaan.